Guddoomiyaha ismaamulka Kilifi oo doonaya inuu isaga baxa xisbiga ODM | Star FM
Home Wararka Kenya Guddoomiyaha ismaamulka Kilifi oo doonaya inuu isaga baxa xisbiga ODM
Guddoomiyaha ismaamulka Kilifi oo doonaya inuu isaga baxa xisbiga ODM
Barasaabka ismaamulka Kilifi Amason Kingi ayaa dhaleeceeyay qaar ka ka mid ah siyaasiyiinta dowlad deegaanka Mombasa ku waas oo wacad ku maray inay ka sii mid ahaan doonaan xisbiyada ay haatan ka tirsanyihiin.
Mr Kingi ayaa sheegay in gobolka Xeebta u isku diyaarinaya inuu soo bandhigo xisbi cusub.
Waxaa u sheegay in ay khalad ahayd in guddoomiyaha ismaamulka Mombasa Cali Xassan Joho uu ku adkeysto in uu sii joogo xisbiga ODM halka dhanka kale uu doonayo in gobolka xeebta uu midoobo.
Hadalka guddoomiyaha ismaamulak Kilifi Amasom Kingi ayaa ku soo aadaya maalmo uun ka dib markii xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Mvita ee isaamaamulka Momabasa Cabdulsamad Naasir uu ku andacooday in isaga iyo Joho aysan ka tagi doonin xisbiga ODM mar hadii ay maalgashi badan ku sameeyeen xisbigaasi.
Xilli saxaafadda la hadlay ka dib markii u kulan la qaatay wakiillada dowlad deegaankaasi ayuu sidoo kale ku adkeystay inuu maalgashi badan ku sameeyay xisbiga ODM laakiin uu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo ka dib markii uu daraaseeyay dareenka codbixiyaasha gobolka Xeebta ee ah in la sameeyo xisbi u gaar ah gobolkaasi.
Waxaa u sidoo kale ku adkeystay in xisbiga cusub uu yeelan doono aragti qaran oo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Xeebta islamarkaana uu xubin ku yeelan doono dhamaan gobollada dalka.